. * . * . ကြယ်တစင်း . * . * .: ကျမနှင့် ပထမဆုံးများ
ရေးသားသူ မိုးခါး at 9/09/2009 01:54:00 PM
ပြည့်စုံ အခု ပထမရပါတယ်ဗျာ...
၀မ်းနည်းကြေကွဲဖွယ်ရာ ပထမဆုံးလေးတွေကို ဖတ်မိပြီး
ဘ၀ဆိုတာ ဒီလိုပါပဲလေ.. ဖြစ်ချင်တိုင်းမဖြစ်တဲ့
September 09, 2009 2:37 PM
မိုးခါရေ ပထမဆုံးတွေ လာဖတ်တယ်ကွယ်။ မေသူတော့ အဟီး မေ့တွားပြီ။ သတိမရတော့ဘူး။ :D
ပထမဦး ဆုံးတွေထဲ မှာ တခုခု ချန်ထားရစ်ခဲ့တာလား လို့ 
အကုန် အစုံ မရေးဘဲ တမင်မေ့ကျန်ခဲ့ပုံ ရတယ်နော် ...
first .... love/kiss ?????
ဟိဟိ .. ဆက်ရေးပါအုံး .. အပိုင်း ၂ မျှော်နေတယ်ဗျိုးးးး
စိတ်ကူးပေါက်ရာချရေးတာလည်း ဖတ်လို့ ကောင်းလိုက်တာနော်။ ပထမဆုံးများတဲ့။ တစ်ခုဖတ်ပြီးတိုင်း ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် စဉ်းစားကြည့်မိတယ်။ ငါကော ဘယ်လိုလဲလို့ ပေါ့။
ထူးဆန်းပါ့ ပထမဆုံးများတဲ့ အမေ့ဗိုက်ထဲကထွက်တာ သူပြောမှ ပထမဆုံး သိတယ်း) အဟီး
ပထမဆုံးတွေရဲ့ မမေ့နိုင်စရာလေးတွေကြားမှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ ညီမမိုးခါးရေ။
ငယ် ငယ် က အမကိုမွေးတော့
အမလောကကြီးကိုပထမဆုံးစရောက်တဲ့နေ့က ပတ်ဝန်: ကျင်ကိုပျော်ရွှင်မှူတွေပေးဆပ်ချင်းနဲ့စတင်ခဲ့တာလေ
သာရ ပြည်.၀ပါတယ်ဗျာ ... တခုဘဲသိချင်မိတယ်
ခုချိန်ထိ ငတ်ကြီးကျတုန်းဘဲလားလို. ဟီးးးးးးးးးးးးးး
အချက်အလက်အကြောင်းအရာလေးနဲ့ သေချာတွေးပြီး ရေးသွားတာ သဘောကျမိတယ်။ ဘယ်လိုမန့်ရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး။ သေချာတာတော့ မောင်နှမက မတည့်တာကောင်းပါတယ်။ ကွယ်ရင်မေ့ တွေ့သေအောင်လွမ်းထက် အများကြီးကောင်းပါတယ်။
အရေးကြီးသော ပထမဆုံးအချို့ကျန်နေသေးသည်။ ဆက်ရေးပါရန်
အိမ်သာတက်ရင် အခုမလိုက်တော့ဘူးဆိုလို့ တော်သေးနော် ဟိဟိ
လာဖတ်သွားတယ် နော် မှတ်မိပါတယ် အမေနဲ့မနေဘူး ပြန်လိုက်သွားမယ် ဆိုတဲ့ကိစ္စ တခါရေးဖူးတယ် ဟုတ် ဟွန်းးး များက ဥာဏ်ကောင်းပါတယ် ဟက် ဘိုင်တာ့တာ
တကယ်ကိုအဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ Post လေးပါပဲခင်ဗျာ..
September 10, 2009 4:59 AM
အမေအပေါ်သိပ်ချစ်တဲ့ ညီမလေးပဲ နှစ်နှစ်ခွဲသမီးလေးတည်းက စိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်တယ် မထင်ပါဘူး။ပြီးတော့ အိမ်သာမလိုက်တော့ဘူးလို့ ရေးထားတာလေးက ချစ်စရာ ပြုံးရတယ်။ ညီမလေးရေ အက်ဆေးလေးကောင်းလိုက်တာ။
ဟုတ်တယ် ကိုသီဟ ပြောသလိုပဲ
ပထမ တစ်ချို့တွေ ကျန်နေသေးတယ် ညီမ။
အမေ့ ကိုသတိရတတ်သားဗျ... နှစ်ခါရှိပြီသတိရတာ... စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့.. အဲဒိတုန်းက ကိုယ်ကငယ်သေးတာပဲ....
ကျမက တော်တော်ကြောက်တတ်ပါတယ် .. ကြောက်တဲ့အရာတွေကလည်း ခပ်များများရယ် .. သရဲဆိုလည်းကြောက် .. အကောင်ဗလောင်ဆိုလည်းကြောက် .. ရန်ကုန်မှာမိုးရွာလို့...